Mai Chibwe VekwaZimuto: Furo jena rinobuda muchitubu pakurhojana.
Kune vakawanda vari kubvunza kuti pakurhojana chii chinoitisa kuti furo jena ribude mumukadzi. Rinoonekwa kana wozvipukuta kana kuti wopukuta chombo chomurume. Pamwezve kana wakavata nomusana murume ari mukati muchikoirana, rikatanga kubuda unohwa richieredza rakananga kumubhedha. Rinoitiswa nei uye sei risingaiti nguva dzese pamunovatana?
Chokutanga ndechokuudza vaya vanotya zvinhu zvavasingahwisisi kuti chitubu chako kana chaita dambudziko unokasira kuziva nokuti panobuda hwema hwakasiyana uye panokwanisa kuvava zvokuti unogarokwenya. Furo jena iri harina hwema hwakaipa asi rinowedzera hwema hwechitubu. Zvinohi kana murume akakukasirira iwe ukada kuti akasirezve kumira chombo kuti akupamhidze, unovhura makumbo womufukidza jira musoro kuti hwema hwese hwechitubu humukasirire kumira chimbo.
Furo iri harina chakaipa pariri. Chokutanga ndechokuti rinoitika kuvanhu vakawanda chose uye hachisi chigwere. Rinoitika kana wamboita nguva zemo rakakwira usina wawavata naye uku uchieredza kubva mukunyorova kwechitubu.
Zvoitazve kuti pakati penguva yokumwedzi paunokandira zai furo iri rinosiyana ruvara gwaro uye kuwanda zvokuti kana uri munhu anogarovata nomurume uye murume wako achikuitisawo zemo guru, uchaona kuti kuwanda kwefuro iri kunosiyana panguva yemazuva epakati pokuenda kumwedzi.
Furo kuwanda kwezemo chete. bvisanai zemo pasina anotya nazvo. Vamwe vanowanza furo vamwe havaiti furo, vamwe vanoita dzimwe nguva voshaya dzimwe nguva. Usatambudzika nazvo. Tarisa nguva yomwedzi ugoona kana zvichichinja pakufamba kwemwedzi. Tarisazve kuti wange une zemo rakadii musi uyu uchikombeya nemamwe mazuva.
Asi hwema hwechitubu hwukachinja zvokuti unohwa kuti hwashata, ndiyo nguva chete yokunoona murapi nokuti unenge wava noutachiona harisi zemo.
Varumewo ukaona paya uri mukati memukadzi wako muchinakirana, ukaona ari kubuda furo jena rakaita seCREAM, ziva kuti mai Chimwana vane zemo guru nhasi saka chimbovanonokerawo vawane nguva yokubva zemo. Ukuwo wopota uchishandisa maoko panoda kukwizirigwa kuti vakasire kuwana mukana wekuguta.
Murume ndiwe unototanga kuona furo iri nokuti kuti mukadzi atarise pari kukoigwa nechombo zvinonetsa. Iwe murume ndiwe unoona chombo chese chazara furo mukadzi asati azviona fungwa iri pakunakira murume. Toti mukadzi akafongora iwe murume uri kupinda nokumashure, unokwanisa kuona pari kupinda chombo. Totizve mukadzi avete nomusana akapakachira makumbo pamafudzi amurume, iwe murume unoonazve pari kupinda chombo. Pane maitire akawanda anobvumidza murume kuona chombo chichipinda zvokuti anoona furo richizara pachombo.
Kana wazviona usavhunduka, hapana chakaipa Izemo chete. Asizve kana mukadzi waunaye riri hure raunotoziva kuti anogarokwigwa nevamwe varume, chibva wazivawo kuti anokwanisazve kunge ane zvigwere zvauri kutokasva nechombo chako chero ane furo chero asina. Kana ari wako wemumba usavhunduka. Chingofunga yokugutsa umwe wako chete.
Furo kana kunyanyonyorova hachisi chigwere. Izemo. Zemo mushonga waro murume ane nguva yokuribvisa. Woitawo kana maminitsi gumi uchikoira mukadzi wako achihwawo pane moyo, wozodiridzira hako mukadzi aguta. Dai varume muchinyatsohwisisa kuti nguva yokukoigwa nomurume inguva yakaita sei dai muchikasira kudzidza kutora nguva muchiita basa iri. Mukadzi anogaroguta kana pamuromo chaipo haana. Hauhwi achikomburena pane zvakawanda.
Posted by Mai E Chibwe at 08:35
Nyaya youmhandara yaendeswa uko kwakahi Kana wafunga kubviswa humhandara"
Nyakubvunza enda unotarisa ikoko
8 June 2014 at 07:11
Maita basa Mai Chibwe. Mogona kuposita herewo zvemadifferent sex positions, for both sexes, anofarira vanhurume neanofarira vanhukadzi, anoitisa orgasm.
18 January 2015 at 14:47